Maraykanka oo dib u dhigay go'aanka ku saabsan in la qaado cunaqabataynta Sudan - Horn Future
Maraykanka oo dib u dhigay go’aanka ku saabsan in la qaado cunaqabataynta Sudan
Khartoum(Horn Future)-Wasaaradda arrimaha dibada ee Maraykanka ayaa sheegtay in Maraykanka uu dib u dhigay go’aanka ku saabsan in si kamadamabys ah looga qaado cunaqabataynta saaran dalka Sudan.
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ayaa waxa uu qaaday cunaqabateyntan muddo 6 bilood ah bishii January,taas oo keentay in la joojiyo mamnuucista saaran ganacsiga iyo in la sii daayo hantida xaniban iyo sido kale in meesha laga ka saaro cunaqabataynta dhaqaale.
Waxa la filayay in madaxweynaha imika Donald Trump uu soo saaro maanta go’aan ku saabsan in cunaqabateyntan si joogta ah loo laalo iyo inkale.
Dhanka kale Sudan ayaa sheegtay Salaasadii shalay inay ka jawaabtay dhamaan codsiyadii Maraykanka si loo qaado cunaqabatayn uu ku soo rogay muddo 20 sanadood ka hor,taas oo noqotay mid ku gudban dhaqaalaha dalka.
Sida warbaahinta caalamku ay sheegtay maamulka Maraykanku war qoraal ah oo uu soo saaray ayaa waxa lagu qiray in Sudan ay sameeysay “hore-umar la taaban karo oo muhiim ah meelo badan,” laakiinse dhanka kale lagu sheegay inay u baahan tahay 3 bilood oo dheeraad ah si loo hubiyo in Sudan si buuxda ay ula dhaqantay cabsida Washington.
« Maxkamadda Yurub oo go’aamisay maanta mamnuucida xidhashada indho-shareerka	» Qaybtii 5aad ee ciidamada qalabka ee ka socda dalka Turkey oo soo gaadhay imaaradda Qadar